WTN Executive kutungamira Montenegro mu Tourism Maitiro uye Maitiro
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Montenegro Kupwanya Nhau » WTN Executive kutungamira Montenegro mu Tourism Maitiro uye Maitiro
Nhau Nhau • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Hurumende Nhau • Montenegro Kupwanya Nhau • nhau • vanhu • Kuvakazve • ushanyi • Tourism Kutaura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Akasiyana Nhau
Aleksandra Gardasevic-Slavuljica, mutungamiri muWorld Tourism Network (WTN) parizvino ari zvakare director wezvekushanya marongero nemaitiro muMontenegro.
Musoro weBalkan Chitsauko cheiyo World Tourism Network (WTN), Aleksandra Gardasevic-Slavuljica yakasimudzirwa
Aleksandra Gardasevic-Slavuljica parizvino ari zvakare Director-General for Tourism Policies uye Strategies ku Ministry of Economic Development in Montenegro
Izvi zvinounza kudyidzana pakati peWTN neMontenegro kune nhanho nyowani.
Juergen Steinmetz, sachigaro weWTN akarumbidza achiti: “Tese tiri kuWTN tinokorokotedza Aleksandra pachigaro chake chakakosha. Aleksandra anga ari chikamu chakabatana chesangano redu uye ari kutora basa rake semutambi wepasirese wepasirese kuenda padanho rinotevera. Tinomushuvira zvese zvakanaka uye tiripano kuti tibatsire munzira ipi neipi yatinogona.
"Tiri kutarisira kushanda naAleksandra neMontenegro mukuvakazve kufamba."
Aleksandra Gardasevic-Slavuljica Akati:
“Iri idanho guru rehunyanzvi uye kuzivikanwa kukuru kwandiri. Zvinonzwa zvakanaka kana mumwe munhu akabvuma kuedza kwako uye ruzivo uye kana iri rumbidzo yako huru yebasa racho. Unogona kushamisika nekutaura kwangu, asi ini ndinozvitaura nechikonzero. Ndinovimba kuti Montenegro haisi munzira yekushanya kwayo uye kupora kwecovid asiwo mukugadzira nzanga yemabatiro, uko vanhu vachapihwa zvinoenderana nehunyanzvi hwavo neruzivo.
Tine nzira refu refu yekuenda, asi ndine chokwadi chekuti munguva pfupi Montenegro ichava parera reMediterranean, asi zvechokwadi. Ndinofanira kutaura uye ndinotaura zvinonzwika kuti ini ndinopa chikwereti chikuru kune vamwe vangu kubva kuWorld Tourism Network. Kuva nhengo yechikwata chenyu, ndakadzidza zvakawanda kubva pamuri mese. Ndinonzwa ndakasimba nekuve neWTN semutsigiri wangu uye chipangamazano wangu. ”
Sangano reWorld Tourism Network riri kufambisa nhaurirano yekufambisa nevatungamiri venyika dzekushanya munyika zana nemakumi maviri nenomwe Zvekuva nhengo uye rumwe ruzivo shanya www.wtn.travel